T-shirts ine anodhinda → Nyanzvi yekomboni yakashongedzwa • P&M
Dzazvino kombiyuta yemakomputa Iyo inoshandiswa kushongedza mhando dzakasiyana dzemicheka uye zvipfeko, senge akadhindwa T-shirts, pamwe nehembe dzemunhu dzinoshandiswa pabasa uye pamhando dzese dzemisangano.
Kupfeka zvine chinyorwa kunogona kuve chinhu chekushambadzira uye kubatsira mukuvaka yako yega brand. Kudhinda komputa kunoiswa mashati, burugwa, sweatshirts, kapu, zvipfeko zvekudzivirira uye zvebasa.
Iyo yakajairika, zvakadaro T-shirts neye yako kudhindaizvo zvinozivikanwa kwazvo nhasi. Vanokutendera kuti ushandise wega, kunyangwe iwo chaiwo mazano epamberi pako. Iyo zvakare mhinduro yakanaka kumakambani, masangano, masangano ese uye vanhu vamwe nevamwe vanoda kushandisa mbatya dzavo neicho chiratidzo kana zvakanyorwa pairi.
Saka yakatsvaga-inoshanda ikozvino, yemazuva ano uye yepakutanga kushongedza machira nezvipfeko zvinogona kuitwa nenzira kombasi yemakomputa. Zviratidzo nezvinyorwa zvakagadzirwa nenzira iyi zvinogara zvakasimba uye zvinonaka panguva imwe chete. Zvishongedzo saka zvinogona kuitwa pamhando dzese dzezvipfeko zvezvinangwa zvakasiyana, zvinosanganisira mumiriri kana kushambadzira zvipfeko.
Girafu yega uye kugadzikana
Mumwe nemumwe akagadzirwa yepakutanga mapatani zvakasikwa pamachira. Iyo michina yekushongedza nzira inokutendera iwe kuti ugadzire inenge isingaverengeke huwandu hwezviratidzo mune chero vara raunosarudza.
Kutenda kune michina yehunyanzvi, zvinokwanisika kugadzira mapatani akasarudzika pamarudzi ese ezvipfeko uye machira akasiyana siyana achishandisa nzira yekushongedza yemakomputa.
Mucheka uyu unogona zvakare kushandiswa zvinobudirira kutara mhando dzakasiyana dzeT-shirts padzinofanira kuoneka logo yekambani kana sangano, chinyorwa kana chiratidzo chakasarudzika.
Rudzi urwu rwekushongedza runoshingirira kunyangwe kugezesa uye kushandisa mbatya zvakanyanya. Mukuwedzera, inochengetedza mavara akajeka mukati mehupenyu hwehembe. Computer embroidery Inoshanda chaizvo pamhando dzakasiyana dzemachira, pakotoni, machira ekugadzira, kunyangwe pazvipfeko zvekudzivirira kana dehwe.
Kutenda nekushandiswa kwetekinoroji yazvino, zvinokwanisika kugadzira chiratidzo chepakutanga, chakasarudzika uye chakasimba kana chinyorwa pamhando dzakasiyana dzekupfeka. Kusanganisira dzakasiyana siyana dzevakadzi uye dzevanhu t-shirts, mitambo, basa kana mazuva ese hembe.
T-shirts yakadhindwa neyekushongedza kwemakomputa inozivikanwa nekushandisa tambo dzemhando yepamusoro dzekushongedza. Izvi zvinovimbisa kusimba kwechiratidzo chakaitwa. Nekushandisa kwakasimba kwembatya uye kuwacha kazhinji, kunyangwe patembiricha dzakakwirira, mhando yacho haidzikire.
T-shirts ine chako chinyorwa inogara ichizivikanwa neyekutanga dhizaini iyo hwaro hwebudiriro.
T-shirts evarume, pamwe nevakadzi vakadhindwa t-shirts, ndiro rinotsvakwa-mushure meboka zvigadzirwa. Ichi chikamu chekupfeka chine nzvimbo yakakosha mukupa kwedu.
Embroidery yekombuta inoshandiswa kushongedza T-shirts. Rudzi urwu rwekushongedza machira runoda hunyanzvi mukugadzira mapatani, sezvo zvinhu zvakawanda zvinofanirwa kutariswa panguva yebasa, izvo zvichazopa vimbiso yekuita kwakasarudzika. Zvinhu zvakakosha zvakakosha zvinofanirwa kuzivikanwa panguva yekugadzirira chirongwa. Iyo dhigirii yemhando yakaoma kunzwisisa inoshandura mukugadzwa kweiyo tambo yeiyo tambo inoshandiswa kugadzira iyo pateni, iyo substrate yezvinhu uye saizi yechakakonzera chiratidzo.
Maitiro ekugadzira komputa anodhinda anotanga nekugadzira dhizaini uye nekusarudza mavara. Panhanho inotevera, kudhindwa kunoitwa pamucheka.
Yakakura ruzivo mukugadzira yakashongedzwa yekombuta ivimbiso yemhedzisiro yekupedzisira mhedzisiro. Muenzaniso wekuraira unoratidzwa pazasi pamuenzaniso weiyo t-shati yemitambo ine chinyorwa.
Mhando dzakasiyana-siyana dzemaketani uye nzvimbo yakakodzera yekushongedza inokutendera kuti ugadzire zvepakutanga zvinyorwa. Kugadzira kwevatengi hakuna miganhu, kunyanya nezvipfeko zvakarairwa zvemarudzi ese ezviitiko zvakakosha uye zviitiko.
Pakutanga akagadzira mapateni uye zvinyorwa zvinoshongedza kwete chete mahembe emitambo ane avo anodhinda kana epoti mahembe ane embroidery yekombuta, asiwo anoshanda uye anodzivirira zvipfeko.
Iko kupihwa kweT-shirts kwakadhindwa nekomboni yekushongedza kunoendeswa kune vese vanhu, masangano, uye makambani anoda kumira aine zvipfeko zvakashongedzwa zvine anoonekwa anodhinda avo pachavo logo, zita rekambani kana sangano mucherechedzo.
toti shangu dzakadhindwa T-shirtsdecathlon T-shirts nekuprintauko kwakadhindwa t-shirtskupi kutenga maT-shirts akadhindwakupi kwekutenga t-shirts uine chako chinyorwakwaunogona kutenga akadhindwa t-shirtskwaunogona kuhodha t-shirts uine chako chinyorwauko kwaunogona kugadzira T-shirts nekudhindauko zvakanakira odha t-shirts uine chako chinyorwakupi kwekuhodha t-shirts nekudhindakupi kwekuhodha t-shirts uine chako chinyorwakupi kugadzira akadhindwa T-shirtszvinoda marii kuburitsa T-shirt yakadhindwazvinoda marii kuita T-shirt yakadhindwamaitiro ekushambidza chena akadhindwa T-shirtskugeza sei maT-shirts akadhindwanzira yekuayina sei maT-shirts akadhindwamaitiro ekugadzira akadhindwa T-shirtsmaitiro ekugadzira t-shirts nekudhindakumhanya t-shirts nekudhindat-shirts dzevakadzi dzakadhindwaT-shirts dzevakadzi nekudhinda kwakoT-mahembe evana ane anodhindakumhanya t-shirts nekudhindamichero yeiyo loom t-shirts nekudhindaekurapa t-shirts nekudhindaT-shirts evarume ane anodhindaT-shirts evarume ane 3d anodhindanhabvu nhabvu dzakadhindwanhabvu yenhabvu ine yako yekudhindapolo shati nemapepashanda t-shirts nekudhindazvemitambo T-shirts nekuprintamitambo t-shirts ine yako yekudhindaThermoactive T-shirts nekudhindaT-shirts ine yakadhindwaT-shirts rakadhindwa 3dT-shirts ine allegro yakadhindwaT-mahembe ane mashandiro eBiałystokt-shirts ane zvinyorwa zvevakadziT-shira nekudhinda kwevanaT-shirts ane Gdańsk anodhindaT-shirts ine anodhinda kwaunotengaT-shirts ane anodhirowa kupi kwekurairaT-shirts nekudhinda maitiro ekugadziraT-shiti nemapepa akafanana nababa, mwanakomanaT-shirts ane Katowice anodhindaT-shirts neye Krakow anodhindaT-shirts ne chikepe kudhindaT-shirts ine Lublin anodhindaT-shirts ine chinyorwa chevarumetsika-yakadhindwa T-shirtsT-mahembe ane imprint olsztynT-shirts neyekudhinda poznańT-shirts ine chinyorwa chevanhu vazhinjiT-shirts ine bristles anodhindaT-shirts ine iyo Warsaw kudhindaT-shirts ane chako chinyorwaT-mahembe ane imprint wrocławT-shirts ine yekuda nyika kudhindaT-shirts neye yako kudhindaT-shirts ine yako logo logoroT-shirts neyewako kudhinda KrakowT-shirts neyako yekudhinda poznańT-shirts ine yako yekudhinda yakachipat-shirts ane chako chinyorwa warzawawaT-shirts neyako wega chinyorwa wrocławzvinosetsa t-shirts zvine anodhindat-shirts anodhura ane chinyorwat-shirts anodhura ane ako anodhinda